Mauricio Pochettino Oo Magacaabay SADDEXDA Ciyaartoy Ee Ugu Wanaagsan Premier League | Laacibnet.net
Mauricio Pochettino Oo Magacaabay SADDEXDA Ciyaartoy Ee Ugu Wanaagsan Premier League
Tababarihii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa magacaabay saddexda laacib ee waqtigan ugu fiican horyaalka Premier League, kuwaas oo ah xiddigaha ay tahay inuu kasoo dhex baxo ciyaartoyga la siinayo abaal-marinta PFA.
Mauricio Pochettino oo bishii November laga caydhiyey shaqada Tottenham oo lagu beddelay Jose Mourinho, ayaa waxa uu bannaanka garoomada ku joogay oo u diiddanaa inuu koox kale layliyo heshiiskii uu Spurs kula jiray oo dhigayay in aanu muddo cayiman koox kale qaban doonin.
Mashruuca lacagta badan la gelinayo ee Sucuudigu kacaanka cusub kaga abuurayo horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ee Premier League oo uu ka iibsanayo Newcastle United ayaa la saadaalinayaa in hormood looga dhigo Pochettino.
Waraysi taxane ah oo uu Mauricio Pochettino bixiyey toddobaadkii tegay dhamaadkiisa, ayaa waxa laga weydiiyey su’aal xaasaasi ah oo la xidhiidha ciyaartoyda horyaalka Premier League waqtigan ka dheesha, iyadoo laga dalbaday inuu soo xulo saddexda laacib ee uu shaqsi ahaan rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu fiican xilligan.
Tababaraha reer Argentine ayaa waxa uu saddexda ciyaartoy ee ugu fiican ka reebay xiddigaha Liverpool ee Sadio Mane, Jordan Henderson iyo Virgil van Dijk oo ay dad badan saadaalinayaan inuu midkood noqon doono.
Saddexdan laacib oo lagu daray Mohamed Salah ayaa waxay Liverpool u horseedeen inay 25 dhibcood ku qabato hoggaanka Premier League oo ay laba guulood oo kali ahi uga hadhsan yihiin inay soo afjarto abaartii soddonka sannadood ka haysatay hanashada horyaalka oo ay ugu dambaysay 1990-kii.
Mohamed Salah, Jamie Vardy iyo Pierre-Emerick Aubameyang oo lagu daray Mane oo ah kuwa goolasha ugu badan ka dhaliyey Premier League ee ay kabta dahabka ah u dhaxayso illaa hadda ayaa uu soo hadal=qaadi waayey markii la su’aalay inuu lasoo baxo saddexda laacib ee ugu fiican.
Pochettino waxa uu ciyaartoyga ugu wanaagsan u doortay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Manchester City ee Kevin de Bruyne, waxaanu raaciyey oo kaalinta labaad uu ka dhigay weeraryahanka ay isku waddanka yihiin ee Sergio Aguero.
Ciyaartoyda saddexaad ayaa waxa uu u doortay Roberto Firmino oo aanay cidina kaalmaha sare ee saadaasha laacibiinta ugu fiican Premier League keenin, laakiin xaqiiqadu tahay inuu yahay xidhiidhiyaha Sadio Mane iyo Mohamed Salah ee marka uu maqan yahay ay dhantaalan tahay kubadda Liverpool, gaar ahaan afka hore.
Si kastab, miyey akhriste kula tahay in xulashada Pochettino ay tahay kuwii saxda ahaa, miyaad se rumaysan tahay in saddexdan ciyaartoy ay u qalmaan in midkood la siiyo abaal-marinta xiddiga sannadka? Fikirkaaga kaga dhiibo halka hoose ee falcelinta, adiga oo soo dooranaya saddexda laacib ee fikir ahaantaada ay ugu fiican yihiin horyaalka Premier League waqtigan.
Maya ilama aha aniga waayo waxa premier league ugu fiican debruyne Salah mane
Xusein mayax says:
Mya wxa ugu horeya debruye David Silva iyo mane intas ayay aniga ilathy
AdElmi iidoow says:
Saidu mane alxsander arnold kavin De Bruyne
de bruyne wa sax aniga wxn raacin laha arnold iyo VVD
3 virgil van dick
Aniga waxay ila tahay de bruyne virgil van dijk iyo bruna Manchester
MARKAAWI MAN CITY says:
1. Kevin d bruyne
Zaki Mohomett Amein says:
Aniga waxey Ila Tahy
Debruyne kaliya zaxay 1:debruyne
Ustaad Abdikadir says: